Hab-dhaqanka finnishka - InfoFinland
Warar ku saabsan Finland > Warar aasaasi ah oo ku saabsan Finland > Dhaqamada iyo diimaha ka jira Finland > Hab-dhaqanka finnishka
Sinnaanta, kalsoonida, daacadnimada iyo bey’ada ayaa ah tusaalooyinka waxyaabaha ay Finnishka qaddariyaan ee muhiimka u ah. Boggan waxaad ka heleysaa macluumaad guud oo ku saabsan waxyaabaha ay Finnishku qaddariyaan iyo caadooyinkooda.
Sinnaanta iyo caddaaladdu waa qayimyo Finnishka muhiim u ah. Bulshada Finnishka dhexdeeda dadka oo dhan waa siman yihiin waana in dhammaan si cadaalad ah loola macaamilaa. Macluumaadka sinnaanta iyo mid ahaanshaha waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Sinnaanta iyo isku qiimo ahaanshaha.
Sida uu sharciga Finland qabo dumarka iyo ragu waa siman yihiin. In dumarku ay shaqeeyaan Finland waa wax ka caadi ah, xittaa marka ay carruur heystaan. Ninka iyo naagta labadooduba waxey mas’uul ka wada yihiin daryeelista carruurta iyo guriga.
Waa wax caam ah in Finnishku ay aaminaan dadka kale iyo saraakiisha dowladdaba. Waxaa sidoo kale Finland laga tixgeliyaa dimuquraadiyadda iyo xorriyadda hadalka. Qof kasta wuxu xaq u leeyahay ka qeyqaadashada hawlaha bulshada. Xorriyadda hadalka ayaa sidoo kale ka jirta Finland.
Dhaqanka Finland shaqsinimadu waxey uga muuqataa si ka badan dhaqamo kale oo badan. Xorriyadda shaqsi ahaan waxey aad uga muuqataa sharciga degsan ee Finland.
Goob u gaar
Finnishku waxaa kale oo ay qadariyaan gaar ahaanshaha iyo boog u gaar ah. Tusaale ahaan waxaa dhallinyarada qaangaarka ah lagu dhiirigeliyaa in ay xoroobaan oo ay guri u gaar ah u guuraan.
Daacadnimada iyo waqti ku imaanshaha
Daacadnimada ayaa Finland laga tixgeliyaa. Waa muhiim in ballanta la oofiyo runtana lagu hadlo. Waqtiga ku imaanshuhuna wuxuu sidoo kale muhiim u yahay Finnishka. Marka aad kulan leedahay, imow goobta waqtiga lagu ballamay. Haddii aad tusaale ahaan ballan ka qabsaday sarkaa lama dhaqtar, waxaa muhiimad gaar ah in aad soo dhaqsato. Tusaale ahaan, haddii aad ballan qabsatay 12ka, imow meesha wax yar ka hor 12ka. Haddii aad timaado 12ka iyo 10 daqiiqo waad soo daahday.
Finnish badan waxey qiimeeyaan isqaadqaadis la’aanta. Dadku kooxda iskama soo dhexmuujiyaan; cod weyn kuma hadlaan ama isma amaanaan. Hab-dhaqanka wanaagsan ayaa looga arkaa Finland in dadka loo dhug lahaadlo lana dhegeyso. Waxaa kale wax badan la qiimeeyaa shaqeynta iyo hawlkarnimada.
Bay’adu waa arrin aad muhiim ugu ah Finnishka. Dad badan oo Finnish ah waxey ka helaan bay’ada, tusaale ahaana socod ayeey u aadaan ama waxey ka gurtaan miraha. Xuquuqda qof kasta (jokamiehenoikeus) ayaa Finland looga hoggaansamaa. Sida ay qabaan, qof kasta dadku waxey si xor ah ugu dhaqdhaqaaqi karaan bay’ada, dadka oo dhanna uma baahna in ay ruqsad weydiistaan milkiilaha dhulka. Faahfaahinta dheeraadka ah ee xuquuqda qof walba ka sii aqri bogga InfoFinlandi Ku raaxeysiga iyo ku socodka dabeecadda.
Salaanta gacanta qaadka ah waa habka caamka ah ee laysku salaamo marka la joogo marxalad rasmi ah. Ragga iyo dumarku xittaa gacan qaad ayeey isku salaamaan. Waa suurtagal in saaxiibada isu dhow ama ehelku ay hab-siin isku salaamaan. Dhabanada oo la iska dhunkadaase ma ahan wax caam ah.
Marka aad qof kale la hadleyso, fiiri indhihiisa. Indha ka fiirintu waxey Finland ka dhigantahay in aad qofka kale ula dhaqmeyso si toos ah islamarkaasna daacad ah.
Waa caado in afka Finnishka qofku loogu yeero magac koowaad ahaan. Dadka martida ah xittaa waxaa loogu yeeraa magac koowaad, sidaas si lamid ahna saaxiibada. Ugu yeerista magaca koowaad waxey dhacdaa oo kaliya marka lagu jiro xaalado rasmi ah. Hase-yeeshee, waxaa wanaagsan in dadka waayeelka ah lagu yeero hab ka rasmi ah ama ka xushmo badan.
Wada-sheekeysiga iyo is-dhexgalka
Finnishku waxey jecel yihiin in ay wada-hadalka toos uga billaabaan arrinta. Qaabka ay Finnishku u hadlaan waa mid toos ah oo aan leexleex laheyn. Finland waxaa loo heystaa in waxa dadku ay sheegayaan ay dhab ka tahay. Waxa aad dhahdo waxaa loo qaadanayaa run adigana waxaa lagaa sugayaa in aad wax u qabato si waafaqsan hadalkaada.
Wada-hadalka Finnishka waxaa soo dhexgeli kara xilliyo aamusnaan ah. Aamusnaantu ma ahan arrin xun, ee waxaa loo dareensan yahay wax iska dabiici ah. Xilliyada aamusnaanta looma baahna in hadal lagu buuxiyo.
Hadalka codka waaweyn leh waxaa loo qaadan karaa wax aan wanaagsaneyn ama handadaad.
Qof kale oo hadalka laga kala gooyaa waxaa Finland looga arkaa in ay tahay xushmad daro. Sida caadiga ah Finnishku wey sugaan inta qofka ay la sheekeysanayo uu dhameysto hadalkiisa ka hor inta aysan hadlin.
Wax caadi ah ma ahan in dareenka loo muujiyo si fagaare ah. Marka la hadlayo waa xushmad daro in codka kor loo qaado, gaar ahaan marka la joogo goob dadka ka dhexeysa.
Finnishku waxey cunaan cuntooyinka lagu yaqaan Yurubiyiinta, taas oo ah inta badan hilib, kalluun, baradho, bariis ama baasto. Cunista cuntooyinka khudaarta ah waxey noqotay mid la jecel yahay. Waa iska caadi in la cuno labo cunto oo kulul, qado iyo casho. Dadka waaweyn xittaa Finland waxey inta badan ka cabaan caanaha.
Qadada waxaa Finland laga cunaa waqti ka horeeya waqtiyada wadamo kale laga cuno. Goobaha shaqada iyo dugsiyada qadadu waa inta badan 11-12. Waqtiga cashada ee caamka ah waa qiyaas ahaan shanta galabnimo.
Finland waxaa inta badan sare loo qaadaa caafimaadka cuntada. Waxyaabaha ay ka midka yihiin rootiga madow iyo mushaariyooyin kala duduwan waxey qeyb muhiim ah ka yihiin dhaqanka cuntada Finnishka. Tusaale ahaan Lapland waxaa laga cunaa hilibka deerada, halka dhulka xeebahana laga cuno kalluun. Dhinaca kale dhaqanka cuntadu wuu isbeddelaa. Tusaale ahaan baastada Talyaaniga iyo dhaqanka cuntada Aasiyaanku waxey ka muuqdaan Finland.
Xannaano-maalmeedyada iyo dugsiyada waxaa carruurta iyo dhallinyarada laga siiyaa cunto. Dhammaantood cuntada dugsigu waa u lacag la’aan, mana loo baahna in cunto loo soo qaato dugsiga.
Finland waxaa laga cabaa kafee badan. Tusaale ahaan xafladaha ku dhowaad markasta waxaa laga bixiyaa kafee. Shirarka goobta shaqada waxaa inta badan lagu cabaa kafee.
Finland cabitaanada aalkoladu waa qaali, gadashadooda waxaa lagu xiray da’ dadka dhallinyarada ah dartood. Dukaanka cuntada waxaa laga iibsan karaa oo kaliya cabitaanada aan cusleyn. Cabitaanada aalkolada ee culus waxaa laga gataa dukaamada Alko ee ay dowladdu u dejisay. Wadista baabuurka iyadoo khamri la cabsan yahay waxaa macmnuucaya sharciga, waxaana ka dhalan kara ciqaab daran.
Wax ka cunista maqaayadaha Finland mid inta badan ka qaalisan wadamo kale oo badan. Cabitaanada aalkolada xittaa waa ka qaali maqaayadaha. Lacagta cabitaanka looma baahna in laga tago ama siiyo, haddii aan la dooneyn in loo dhiibto mahadcelin gaar ah oo ka dhalatay adeeg wanaagsan.
Dhaqanka cunta ee finnishkaIswidish | Ingiriis | Ruush | Faraansiis | Isbanish | Shiino | Jarmal | Jabanees | Talyaani
Sawnadu waa qeyb muhiim ah oo kamid ah dhaqanka Finnishka. Sawnada waxaa loogu tagalay qubeysashada iyo nasasho, sababtaas ayeey aamsunaanta iyo deganaantu ula xariiraan. Finnish badan waxey sawnada galaan todobaad kasta. Sawnada waxaa lala galaa xubnaha qoyska, saaxiibada iyo dadka ganacsiga lala wadaago. Dumarka iyo raggu waqtiyo kala duwan ayeey sawnada galaan. Sawnada waxaa inta badan la galaa dhar la’aan. Waxaa inta badan kursiga sawnada lagula fariistaa geed yar oo lagu fariisto.
Marti ku ahaanshaha guri Finnish
Finland u martinta guriga qof kale waa in markasta horay looga sii ballamaa, haddii xittaa uu yahay saaxiib aad isku wanaagsan tihiin. Finnishku waxey si gaar ah u qiimeeyaan gaar ahaanshaha iyo deganaanshaha.
Finnishku kabaha kuma gashadaan guryaha dhexdooda. Waa xushmad in kabaha la iska siibo marka aad soo geleyso guriga qof kale. Marka aad tagto guri Finnish, kabaha iska siib ama weydii in aad gashanaan karto kabaha.
Macluumaad ku saabsan hab-dhaqanka FinnishkaIngiriis | Isbanish | Shiino | Jarmal | Burtuqiis